Boeing 737 MAX Cusub ee Caddaanka ah ee Shirkadda: Hawl -wadeennada Boeing oo ku dhuumaalaysanaya Hal Guul
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Boeing 737 MAX Cusub ee Caddaanka ah ee Shirkadda: Hawl -wadeennada Boeing oo ku dhuumaalaysanaya Hal Guul
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Itoobiya • Wareysiyo • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • video
Boeing ayaa khiyaanaysay FAA si ay u xaqiijiso Boeing 737 MAX, taasoo sababtay in 157 qof lagu dilo diyaaradda Ethiopian Airlines. Qareenka hogaaminaya oo matalaya kala badh dhibanayaasha ayaa ku hadlaya af eTurboNews Q&A maanta.
Qoysaskii ay eheladooda ku waayeen shilkii diyaaradda Boeing 737 MAX ee 201,9 oo ay ku dhinteen dhammaan 157 ee saarnaa waxay ereyo adag u lahaayeen Boeing.
Qareenka ayaa sheegay in dowladda Mareykanka aysan aad ugu fogeyn eedeynta Mark Forkner Khamiistii (Oktoobar 14, 2021).
Duuliyihii hore ee diyaaradda cusub ayaa shalay dacwad lagu soo oogay Waaxda Caddaaladda ee Mareykanka ayaa ku soo oogtay lix dacwadood oo la xiriira falalkiisa, oo ay ka mid tahay inuu been sheegay intii lagu guda jiray hawsha shahaadaynta ee diyaaradda cusub.
eTurboNews ku casuumay Kevin P. Durkin oo ka tirsan Clifford Law Firm ee Chicago, IL, USA, si uu u hadlo inta lagu jiro podcast -ka maanta. Wuxuu matalayaa in ka badan 70 dhibane oo ku dhintay diyaaradda Ethiopian Airlines shilkii Boeing 737 MAX.
“Forkner waa nin dhicis ah. Isaga iyo Boeing ayaa mas'uul ka ah geerida qof kasta oo ku dhintay shilalka MAX, ”ayay tiri Nadia Milleron, hooyadii Samya Rose Stumo, oo ku dhimatay shilkii labaad ee dhimashada ahaa bishii Maarso ee 2019. faa'ido lacageed oo ka badan nabadgelyada, Mark Forknerna wuxuu ku shaqaynayey nidaamkaas. Xeer -ilaaliyeyaashu waa heli karaan waana inay helaan dad kale oo aad u tiro yar oo iyaguna mas'uul ka ahaa shilalka. Qoys kasta oo qof ku waayey shilkii MAX wuxuu dareemayaa si la mid ah: madaxda iyo guddiga agaasimayaasha Boeing waxay u baahan yihiin inay xabsi galaan. ”
Shilka diyaaradda Ethiopian Airlines 302 ayaa dhacay kadib markii ay duushay bishii Maarso 2019, waxaana ku dhintay 157 qof oo saarnaa. Shan bilood ka hor, bishii Oktoobar 2018, diyaaraddii ugu horraysay ee Boeing 727 MAX ah ayaa ku dhacday Badda Java ka dib markii ay ka soo duushay Indonesia, waxaana ku dhintay 189 qof oo saarnaa.
“Heshiiska Dacwad -qaadista ee dib loo dhigay runtii wuxuu ahaa DOJ Boeing 'Ha Xukumin Heshiiska.' Runtii cidina ma rumaysna in Forkner uu ahaa jilaa xun oo keliya ee cadaadiskan adag ee macaashka iyo qorshaha lagu khiyaamaynayey FAA, ”ayuu yidhi Michael Stumo, oo ah aabaha Samya Rose Stumo. "Waxay muujineysaa in maamulaha Boeing David Calhoun iyo xubnihii hore ee guddiga ay qof kasta ku tuuri doonaan baska hoostiisa si loo ilaaliyo C-Suite."
DOJ waxay soo saartay dacwad ciqaabeed ka dhan ah Boeing oo ay ku dishay 346 qof labada shil laakiin waxay arrinta ku xallisay horaantii sannadkan waxa loo yaqaan Heshiiska Dacwadda Dib loo dhigay. Professor John Coffee oo ka tirsan Sharciga Columbia ayaa ku tilmaamay “mid ka mid ah heshiisyadii dacwad -qaadista ee ugu xumaa ee aan arkay”. Boeing ma ahayn inay qirto mid ka mid ah eedeymaha loo soo jeediyay, mana jirin cid ka tirsan maamulka Boeing oo dacwad lagu soo oogay. Shirkadda Boeing ee hormuudka u ah sharciga difaaca dembiyada shirkadaha waa Kirkland & Ellis. Erin Nealy Cox, oo ah xeer -ilaaliyihii ugu horreeyey ee dacwadda Boeing, ayaa ka tagtay Waaxda Caddaaladda horraantii sannadkan wax yar ka dibna waxay ku biirtay Kirkland & Ellis oo ay shuraako ku yihiin xafiiskeeda Dallas.
Paul Njoroge oo ka tirsan Toronto, Canada, oo qoyskiisa oo dhan ku waayay shilkii ET302, ayaa yiri: “Ficillada Mark Forkner iyo Boeing ee la xiriira shahaadada 737 MAX, wax soo saarka iyo sii deynta suuqa, waxay keentay dhimashada 346 qof: waxaa ka mid ah xaaskayga, hooyadeed, iyo saddexda carruur ah. Dhaqammada iyo dhaqammada shirkadaha, Mark Forkner kaligiis ma dhaqmin. Maamulayaasha Boeing waa inay ka dambeeyeen ku degdegga soo saarista 737 MAX, suuqa ku riixaan, dakhli iyo dakhli ka sarreeya mashruuca, xiise geliyaan Wall Street, iyo sidaas oo kale, kor u qaadista kaydka Boeing. Markii ay burburtay Lion Air Flight JT610 October 29, 2018, Mark Forkner iyo maamulayaasha Boeing waxay geysteen 189 dil darajada saddexaad. Laakiin ka dib markii ay ku guuldareysteen inay joojiyaan 737 MAX shilkaas ka dib, iyagoo og inay ka weeciyeen diiradda dadweynaha shirkadda iyagoo eedaynaya waxa loogu yeero 'duuliyeyaal shisheeye' shilkaas, waxaa hubaal ah inay galeen darajada labaad 157 dil, markii Ethiopian Airlines Flight 302 ay burburtay markay ahayd Maarso 10, 2019.
"Xeerbeegtida weyn ee federaalku waa inay raacdaa hannaan xaqiiqo raadin oo qotodheer, oo ay dacwad ku soo oogtaa dadka kale, gaar ahaan maamulka ugu sarreeya ee Boeing, ka dibna ay u helaan inay dambiile ka yihiin geerida xaaskayga, saddexda carruur ah, sodohday, iyo 341 kale. Waxaan leenahay dhegeysiga shirweynaha iyo guurtida, halkaas oo agaasimihii hore ee Boeing, Dennis Muilenberg iyo madaxa injineer John Hamilton ay diideen inay ka jawaabaan su'aalaha aasaasiga ah. Waxaan rajaynayaa in eedaynta Mark Forkner ay iftiimin doonto heerka dayacaad, qarinta macluumaadka, iyo hub ka dhex dhaca Boeing ee sababay labada shil. Dadweynaha ayaa mudan inay ogaadaan. Marna caddaalad ii heli mayso geerida qoyskayga, laakiin waxaa jiri doonta caddaalad dadweyne haddii Mark Forkner iyo kuwa kale ee Boeing ay la kulmaan xabsiyada ugu badan, ”ayuu yiri Njoroge.
Robert A. Clifford, oo ah aasaasaha iyo lammaanaha sare ee Xafiisyada Sharciga ee Clifford ee Chicago iyo La -taliyaha Hoggaamiyaha ee dacwadda isku -dhafan ee ka dhanka ah Boeing ee Shilkii 737 MAX ee Itoobiya 737. "Khasaaraha naxdinta leh ee 2019 qof ayaa laga hortagi lahaa haddii Mark Forkner uu hadlo laakiin hubaal kaligiis ma uusan dhaqmin."
Forkner, oo hoggaaminayey Kooxda Farsamada Duullimaadka 737 MAX intii lagu gudajiray horumarka degdegga ah ee adeegga, ayaa lagu soo waramayaa in lagu soo oogay laba dacwadood oo khiyaano ah oo ku lug leh qaybo diyaaradeed oo ka tirsan ganacsiga gobollada iyo afar dacwadood oo khiyaano silig ah. Waxaa lagu wadaa inuu Jimcaha ka soo hor muuqdo maxkamadda federaalka ee Fort Worth, Texas. Dambiga ugu culus ayaa ah ugu badnaan 20 sano oo xarig ah.
Clifford ayaa yiri "Noocan oo kale ah ee damaca shirkadeed wuxuu aad uga fog yahay duuliyihii ugu sareeyay ee shirkadda si lama filaan ah u samaysay diyaaradahan si loo kordhiyo faa'iidada," ayuu yiri Clifford. “Anigoo ah La -taliye Hoggaaminaya dacwadda ka dhanka ah Boeing oo ku hadlaya magaca qoysas aad u badan oo aan waligood isku mid noqonayn, waxaan ka codsanayaa DOJ inay sii waddo baadhitaankeeda dembiyada iyo dacwadaha si loo ogaado inta khiyaanadu aadday iyo cidda joogtay gunta hoose. Waxaan u malaynayaa inay heli doonaan masuuliyiin badan oo shirkadeed oo ka qayb qaatay ka -reebitaanka macluumaadka muhiimka ah ee wakaaladda caddaynaysa. Baadhitaan dembi oo qoto dheer ayaa lagu leeyahay qoysaskan oo bixiyay allabarigii ugu dambeeyay iyo dadweynaha duulaya ee sii wada inay tikidhada ku iibsadaan diyaaradda MAX. ”
“Xitaa haddii la siiyo xukunka ugu badan ee xabsi, taasi waxba ma ahan marka la barbardhigo qoysaskaas oo aan mar dambe arki doonin eheladooda. Way tageen; tagay maxaa yeelay Forkner wuxuu qayb ka ahaa qorshe runta looga qarinayey kuwa awoodda u lahaa inay dayaaradahaan nabad ka dhigaan, ”ayuu yiri Clifford. “Oo muxuu ahaa falcelintii ugu horreysay ee Boeing ee shilalkan inkastoo aan ogaa inay kooneyaal gooyeen? Maamulayaasha Boeing waxay doorteen inay eedeeyaan duuliyeyaasha aan waxba galabsan oo aan waxba looga sheegin nidaamka softiweerka cusub ee gabi ahaanba beddelay habkii ay diyaaradu u dhaqmaysay, sidoo kale buugihii tababarka duuliyuhu xitaa ma sheegin nidaamka software -ka cusub. ”
Clifford waxaa loola jeedaa Nidaamka Kordhinta Astaamaha Maneuvering (MCAS) oo Forkner la sheegay inuusan la wadaagin saraakiisha FAA ka hor inta aysan u oggolaan diyaaradda inay tahay mid ammaan ah oo duuli karta.
Clifford ayaa yiri: "Dadweynaha duulaya weli ma hubo in Boeing ay beddeshay habkeedii iyo in ay ku shaqeyneyso si hufan oo buuxda si loogu oggolaado diyaaraddan iyo diyaaradda mustaqbalka inay duusho," ayuu yiri Clifford.